Isiseko solwazi lwezixhobo zerabha -I-Dongguan Chengda Irabha kunye nePlastiki yeTekhnoloji Co.
I-Chengda ngerabha kunye nePlastiki inamava atyebileyo kukhetho lwe-silicone kunye nezinto zerabha kunye nophuhliso, sinokucebisa nge-silicone efanelekileyo kunye nezinto zerabha okanye ukuphuhlisa ifomula yerabha yesiko kuwe ngokweemfuno zakho ezithile, ukhetho lwezinto zerabha luya kuseka kwixabiso elifanelekileyo Ukufezekisa ixabiso lokunyusa iiprojekthi.
Zininzi izinto ezahlukeneyo kunye neepropathi zesilicone kunye nezinto zerabha, ezisetyenziswa ngokubanzi kwiimveliso ezahlukeneyo nakwimeko yendawo. Umzekelo: Sinento ukutya ukutya abicah, grade abicah izinto, izinto abicah conductive, izinto ilastiki, izinto ubushushu ukumelana, nelangatye nekudodobalisa izinto njl kwaye sine EPDM, NBR ..rubber izinto. Singafumana kwaye sisebenzise izinto ezifanelekileyo ngokweemfuno zabathengi.
I-Chengda ngerabha kunye nePlastiki ixhotywe ngomatshini wokuxuba abicah kunye nomatshini wokuxuba irabha, igumbi lokuxuba elingafakwanga uthuli, kunye nabasebenzi abanamava ukubonelela ngerabha yokusebenza kunye nezinto ezingabalulekanga kwiworkshop yethu yokubumba irabha. .
I-Chengda ngerabha kunye neplastiki yakhe ulwakhiwo oluluqilima kunye nentsebenziswano yexesha elide kunye nomzi mveliso weerabha okhokelayo ongumnini weengcali ezinamava kunye nobuchule obuhle bokuyila, sinokuphuhlisa ukwenziwa kweerabha ngokwesiko ngokweemfuno zabathengi ezithile ngexesha elifutshane.